umatshini wokutya owenziwe ngesinyithi esine stainless ukutya kweendidi zezilwanyana ezifuywayo
Amandla:7.5KW + 0.4KW + 0.4KW izigaba ezizodwa
Umthamo:50~ 60kg / h
Umatshini wethu wokutya owongezelelweyo wesilwanyana wenzelwe ukuba usebenze ngokulula kwaye usebenze ngeendlela ezininzi zokupheka. Abavelisi banokuthi bavelise naliphi na inani lezinto zokwenziwa, iimilo, incasa kunye nemibala. Injongo yethu kukubonelela ngezixhobo eziguquguqukayo nezibukhali ukuze zivelise umgangatho ophezulu, ukutya kwezilwanyana okunezihlwitha kunye nokunesondlo. Izixhobo eziqhelekileyo zokusetyenziswa kwezinto ezisetyenziselwa kumatshini wokutya wehiprizidi zibandakanya umgubo wengqolowa, iiproteni zemifuno, iiminerali kunye neevithamini kunye, kwezinye iimeko, inyama okanye intlanzi yokutya kunye nenyama entsha.
Iimpawu zomatshini wokutya owongezelelweyo kwizilwanyana
1.Wonke umatshini wokutya owongezelelweyo wesilwanyana esenziwe ngentsimbi.
2.Umatshini wesilwanyana wokutya owongezelelweyo uqhubeka ngokupheleleyo kwaye uzenzekelayo.
3.Imilo yokutya yezilwanyana kunye nobukhulu bokugqibela banokwahluka ngokutshintsha kobumba.
4.Nika isayizi yokubumba eyahlukileyo simahla.
5.IVICTOR ebonelela ngokusisiseko sefomula yokutya ngokwemfuno yakho.
6.Umatshini ohlukileyo unokubonelelwa ukuvelisa ukutya kwesilwanyana kuxhomekeka kwimfuno yakho
7.Iipellets zokutya kwesilwanyana zigudile kwaye zilungile, kwanomgangatho olungileyo
8.Ngokufanelekileyo ifanelekile kumzi-mveliso wokutya wezilwanyana ophakathi kunye nomncinci, umzi mveliso wokutya wesilwanyana, kwikholeji yezolimo yezilwanyana zasekholejini, Ivenkile yezilwanyana, isibhedlele pet,
amasimi enja, imakethi yezilwanyana .
Iindidi zesikhunta sokutya kwesilwanyana
Umgaqo-siseko womatshini wokutya izilwanyana ezongezelelweyo
Xa umxube wezinto ezinomgubo zondla ngesilo,iya kujikeleza kwaye incedise ukukhulula kwisikrelem,ujikeleze ujikeleze ukuhambisa kwindawo ekhukhumeleyo yeyiphi impahla eya kukhukhumala kubungakanani bepellet,emva kokukhululwa kwepellet kubola,kuya kubakho iilebheli zokusika,ijikeleze kwaye isike iipellets zokutyela ngokuzenzekelayo.Iebhloko zinokutshintshwa ukufumana ubungakanani obahlukileyo bokutya kwepellet.
Ukutya okwahlukileyo okwahlukeneyo kokutya kwezilwanyana kwenziwa ngumatshini wesilwanyana wokutya owongezelelweyo
Iiparamitha zobugcisa kumatshini wokutya owongezelelweyo wesilwanyana